Ethereum, BNB चेन र बहुभुज खतरामा छ? - Shiv's Era
Ethereum, BNB चेन र बहुभुज खतरामा छ?
TCN को बारेमा के अस्थिर छ र किन यसले फरक पार्छ?
Bitgert BRC20 ब्लकचेनले धेरैजसो क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई स्पिनमा फ्याँकेको छ। महँगो ग्यास शुल्कसँग संघर्ष गरिरहेका अधिकांश क्रिप्टो परियोजनाहरूका लागि शून्य ग्यास शुल्क सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो।
BitGert BRC20 चेन रिभिएरा मायामा खुल्छ
Bitgert BRC20 चेनमा शून्य ग्यास शुल्क छ। यो मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो जसले चेनलाई लन्च हुनु अघि नै लोकप्रिय बनायो। बजारमा यति कम ग्यास शुल्क भएको अर्को कुनै चेन छैन। चेन अहिले सोलाना भन्दा छिटो छ।
यो वर्ष हेर्नको लागि उत्कृष्ट क्रिप्टोकरेन्सी – Bitgert.BRC20
Centcex सुरु गरिएको Bitgert BRC20 blockchain द्वारा चिन्तित छ, यो हेर्न को लागी एक परियोजना हो। टोलीले एक ब्लकचेन-आधारित इकोसिस्टम निर्माण गरिरहेको छ जसले प्रयोगकर्ता आधारहरू, स्ट्याकिंग प्रोग्रामहरू, dApps, इत्यादि सहित असीमित संख्यामा अनुप्रयोगहरू समायोजन गर्नेछ। यी सबै उत्पादनहरू र 100% APY स्टेकिंग पुरस्कारको साथ, त्यहाँ कुनै शंका छैन। बजार मा सबै भन्दा राम्रो पुरस्कृत cryptocurrencies हो।
Bitgert BRC20 सँग कडा प्रतिस्पर्धा प्राप्त गर्न Binance चेन
BNB चेनसँग Bitgert BRC20 चेनबाट चिन्तित हुने वैध कारणहरू छन्। यो ती चेनहरू मध्ये एक हो जसले Binance चेनको लागि मात्र नभई यसका केही प्रमुख उत्पादनहरूका लागि पनि कडा प्रतिस्पर्धा ल्याएको छ।
स्मार्ट अनुबंधहरूले क्रिप्टोकरन्सीको नयाँ युग ल्याउनेछ
Bitgert चेनलाई आज उद्योगमा सबैभन्दा महँगो ग्यास शुल्कहरू मध्ये एक भनिन्छ। Ethereum ग्यास शुल्क $ 50 सम्म जाँदैछ, जसले विकासकर्ताहरूलाई सस्तो प्लेटफर्महरूमा माइग्रेट गर्न बाध्य पारिरहेको छ। ब्रिस चेन ETH चेन भन्दा छिटो हुनु पनि एक प्रमुख चिन्ताको विषय हो।
बहुभुज Bitgert BRC20 Blockchain द्वारा प्रभावित हुन सक्छ
बहुभुज अर्को क्रिप्टोकरेन्सी हो जुन Bitgert BRC20 blockchain द्वारा प्रभावित हुन सक्छ। बहुभुज नेटवर्क को लागि डिजाइन गरिएको छ। स्केलिंग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न इथरियम नेटवर्क। यसले छिटो गति र सस्तो ग्यास प्रदान गर्दछ।